Cunsuriyiinta SD oo is cadeeyay | Somaliska
Xubno badan oo ka tirsan xisbiga cunsuriga ah ee Sverige Demokraterna (SD) ayaa isbuucyadaan fadeexo ku dhacday. Isbuucaan gudihiisa ayaa xubin sare oo ka tirsan SD oo ku jira baarlamaanka lagu qabtay asagoo cabsan oo guriga saaxiibtiis burburiyay ninkaas ayaa shaqada laga fariisiyay waqti ku meel gaar ah. Sidoo kale isbuucaan waxaa soo baxday warbixin sheegeysa in ka badan 80 xubnood oo ka tirsan SD ay iska casileen jagooyinkii kamuunada ee loo doortay ka dib markii ay ka cabsadeen magac xumada ka soo gaareysa ka mid ahaanshaha xisbiga SD. Dhinaca kale wargeysada ayaa maanta qoraya in mid ka mid ah xubnaha Katrineholm ku matala xisbiga SD laga yaabo in laga cayriyo xisbiga ka dib markii uu isticmaalay erayo cunsuriyad iyo aflagaado isugu jira. Ninkaan oo lagu magacaabo Isak Nygren oo 21 jir ah ayaa sheegay in uu ka soo horjeedo in dadka cadaanka ah ay guursadeen dadka kale, sida madowga (oo uu ku tilmaamay Nigro) iyo asianka. Wuxuu sidoo kale aflagaado aad u xun u geystay Islaamka iyo Muslimiinta. Afhayeenka xisbiga SD ayaa sheegay in laga yaabo in ninkaas xisbiga laga ceyriyo balse suaasha ayaa waxay tahay maadaama siyaasada SD ay ku dhisantahay cunsuriyada iyo neceybka Islaamka muxuu qalad gooni ah oo uu sameeyay ninkaan. Xubno badan oo ka tirsan xisbiga SD ayaa lagu sheegaa in ay ka tirsanaayeen ururo taageersan fikradii Hitler, balse arinta yaabka leh ayaa ah in SD ay sidoo kale ay ku jiraan rag Yuhuud ah oo taageersan Israel. Waa la wada ogaa wixii uu Hitler ku sameeyay Yuhuuda. Dadka siyaasada indha indheeya ayaa sheegaya in SD laga yaabo in ay ku socdaan wadadii uu maray xisbi kale oo cunsuri ahaa kaasoo baarlamaanka Sweden soo galay sagaashameeyadii balse markii dambe tartiib u burburay.
Xubno badan oo ka tirsan xisbiga cunsuriga ah ee Sverige Demokraterna (SD) ayaa isbuucyadaan fadeexo ku dhacday. Isbuucaan gudihiisa ayaa xubin sare oo ka tirsan SD oo ku jira baarlamaanka lagu qabtay asagoo cabsan oo guriga saaxiibtiis burburiyay ninkaas ayaa shaqada laga fariisiyay waqti ku meel gaar ah.
Sidoo kale isbuucaan waxaa soo baxday warbixin sheegeysa in ka badan 80 xubnood oo ka tirsan SD ay iska casileen jagooyinkii kamuunada ee loo doortay ka dib markii ay ka cabsadeen magac xumada ka soo gaareysa ka mid ahaanshaha xisbiga SD.
Dhinaca kale wargeysada ayaa maanta qoraya in mid ka mid ah xubnaha Katrineholm ku matala xisbiga SD laga yaabo in laga cayriyo xisbiga ka dib markii uu isticmaalay erayo cunsuriyad iyo aflagaado isugu jira. Ninkaan oo lagu magacaabo Isak Nygren oo 21 jir ah ayaa sheegay in uu ka soo horjeedo in dadka cadaanka ah ay guursadeen dadka kale, sida madowga (oo uu ku tilmaamay Nigro) iyo asianka.
Wuxuu sidoo kale aflagaado aad u xun u geystay Islaamka iyo Muslimiinta. Afhayeenka xisbiga SD ayaa sheegay in laga yaabo in ninkaas xisbiga laga ceyriyo balse suaasha ayaa waxay tahay maadaama siyaasada SD ay ku dhisantahay cunsuriyada iyo neceybka Islaamka muxuu qalad gooni ah oo uu sameeyay ninkaan.
Xubno badan oo ka tirsan xisbiga SD ayaa lagu sheegaa in ay ka tirsanaayeen ururo taageersan fikradii Hitler, balse arinta yaabka leh ayaa ah in SD ay sidoo kale ay ku jiraan rag Yuhuud ah oo taageersan Israel. Waa la wada ogaa wixii uu Hitler ku sameeyay Yuhuuda.
Dadka siyaasada indha indheeya ayaa sheegaya in SD laga yaabo in ay ku socdaan wadadii uu maray xisbi kale oo cunsuri ahaa kaasoo baarlamaanka Sweden soo galay sagaashameeyadii balse markii dambe tartiib u burburay.